Ibhafu kunye neMisebenzi yoMzimba ityhila uluhlu lwazo lweHalloween- iHorror
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	Ibhafu kunye neMisebenzi yoMzimba ityhila uluhlu lwazo lweHalloween
Ibhafu kunye neMisebenzi yoMzimba ityhila uluhlu lwazo lweHalloween
by UTrey Hilburn III Julayi 27, 2020
by UTrey Hilburn III Julayi 27, 2020 1,007 imbono
Kwakuyiveki ephelileyo leyo target baqala ukuthengisa urhwebo lwabo lweHalloween kwindawo yabo. Ngoku Ibhafu kunye neMisebenzi yoMzimba kukhupha uluhlu lwabo lweziqholo ezinuka kamnandi zamaxesha onyaka.
Ingqokelela yeBhafu kunye noMzimba ibandakanya amakhandlela alindelweyo, izinto zokuthambisa kunye nezokucoca izandla. Kodwa kukho izinto ezimbalwa zokuzonwabisa ezifana nezibane zasebusuku kunye nezinye izinto. Kunzima ukutsho into esiyithandayo kuba sibahle kakhulu ngenxa yamakhandlela aneziporho. Kodwa, igazi le-vampire likhangeleka lipholile.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, iThagethi kutsha nje yathumela izinto zabo zeHalloween. Sele zithengisiwe. Kuhle kakhulu ukuba ucinga ukuba u-Okthobha isezindlela ezimbalwa kude. Ndiyaluxabisa uthando lokuphamba nangona. Izinto ezininzi zonyaka ezigqityiweyo zonyaka oseleyo kum. Ngapha koko, xa iKrisimesi isiza ndihlala ndizifumana ndixuba ezo zihombiso kunye ne-Halloween. Ngoku ngale ngqokelela yeBhafu kunye neMisebenzi yoMzimba indlu yam iya kube inuka kamnandi kwaye ibe lixesha lonyaka eliseleyo.
Zeziphi ezinye zezinto zakho ozithandayo ezivela kwingqokelela yeBhafu kunye neMisebenzi yoMzimba? Ezinzulwini zobusuku iBoo Citrus? Ithanga eligqibeleleyo? Ngaba uyonwabile? Sazise izinto ozikhethileyo kwicandelo lamagqabaza.